Teknolojia · Jolay, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Teknolojia · Jolay, 2013
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Jolay, 2013
Vavahady Ampiasan'i Etazonia Hitsikilovana Ny Firenena Amerika Latina i Poerto Riko
Inona no ampamoaka nolazain'i Edward Snowden mikasika ny andraikitry Poerto Riko amin'ny programam-pitsikilovan'ny NSA? Manambara antsika momba izany ny mpanoratra Angel Carrión.
Tambajotra Sosialy Rosiana #1 Voahenjika Any Ivelany
Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Jolay 2013
Notaterin'i Nikolai Durov mpiara-mamorona ny VKontakte tamin'ny 26 Jona 2013 fa nalain'ny manampahefana Okrainiana ny lohamilin'ny orinasa.
Avoakan'ny Anonymous Ireo Kaontin'ny Antoko Mitondra Ao Espaina
Eoropa Andrefana 10 Jolay 2013
Fikambanan'ireo 'hactivistes' manerantany ny Anonymous izay namoaka ny kaontim-bola nandritra ny taona 1990-2011 an'ny Partido Popular (PP)[People's Party], antoko ao amin'ny fitondrana.
Ny Mpiseraseran'ny Tambajotra Shinoa Faly Mitsaho sy Iva Fari-Pahaizana Hoy ny Tatitra
Tati-baovao avy amin'ny Akademia Shinoa Misahana ny Siansa Sosialy izay tantanin'ny fanjakana ka manome marika ny tambajotra sosialy ao Shina ho milina mpandefa tsaho sy ny mpisera amin'ny tambajotra sosialy ao Shina ho iva fari-pahaizana sy fidiram-bola no nanaitaitra indray ny ao amin'ny mpiserasera.
Tsipahin'i Shina Ny Fiampangana An'i Edward Snowden Ho Mpitsikilo
Azia Atsinanana 02 Jolay 2013
Nitodika tao amin'ny gazety Guardian indray i Edward Snowden, mpanao ampamoaka nampahafantatra momba ilay fitsikilovana ankapobeny ny Aterineto nataon'ny governemanta Amerikana, ka hisahana ny famaliana ireo fanontaniana an-tserasera (fanontaniana-valiny) indray amin'ity indray mitoraka ity, taorian'ny filazan'i Shina fa tsy mpitsikilo ho an'io firenena io izy. Tsy nahateny nandritra ny nampalaza...